Nkọwapụta --lọ ọrụ - Newsway Valve Co., Ltd.
BANYERE Newsways Valve
Newsway valvụ CO., LTD bụ ọkachamara ulo oru valves emeputa na ekspootu ihe karịrị afọ 20 akụkọ ihe mere eme, na nwere 20,000㎡ nke kpuchie ogbako. Anyị na-elekwasị anya na imewe, ịzụlite, rụpụta. Newsway valvụ na-nditịm dị ka mba quality usoro ọkọlọtọ ISO9001 maka mmepụta. Ngwaahịa anyị nwere usoro ihe eji enyere kọmputa aka na kọmpụta kọmputa dị iche iche na mmepụta, nhazi na nnwale. Anyị nwere ndị ọrụ nyocha nke anyị iji chịkwaa njiri mara mma, ndị nyocha anyị nyochara valvụ ahụ site na nkedo mbụ ruo ngwugwu ikpeazụ, ha nyochaa usoro ọ bụla na mmepụta. Anyị na-arụkọ ọrụ na ngalaba nyocha nke atọ iji nyere ndị ahịa anyị aka ilekọta valvụ ahụ tupu ebupu.
Anyị ipuiche bọl valves, ọnụ ụzọ ámá valves, ego valves, ụwa valvụ, urukurubụba valves, plọg valvụ, strainer, akara valves. Ihe kachasị dị na WCB / A105, WCC, LCB, CF8 / F304, CF8M / F316, CF3, CF3, F4A, F5A, F11, F22, F51 HASTALLOY, MONEL, ALUMINUM ALLOY wdg Valve size from 1/4 inch (8 MM) ruo 80 inch (2000MM). A na-ejikarị valvụ anyị eme ihe na mmanụ na Gas, Nnukwu Mmanụ Ala, Chemical na Petrochemical, Mmiri na Mmiri Mmiri, Ngwọta Mmiri, Ngwuputa, Mmiri, Ike, ụlọ ọrụ pulp na Akwụkwọ, Cryogenics, Upstream.
Uru na ebumnuche
Newsway Valve bụ nnukwu ekele maka ụlọ na mba ofesi. Ọ bụ ezie na e nwere asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ n'ahịa n'oge a, NEWSWAY VALVE na-enweta mmepe na-aga n'ihu ma na-arụ ọrụ nke ọma site na ụkpụrụ njikwa anyị, ya bụ, sayensị na teknụzụ na-eduzi, nke ejiri ya rụọ ọrụ, na-agbaso ezi obi ma na-arụ ọrụ dị mma .
Anyị na-anọgidesi ike n'ịchụso ịdị mma, na-agbasi mbọ ike iji wuo Newsway brand. A ga-agba mbọ dị ukwuu iji nweta ọganiihu na mmepe n'etiti anyị niile.